Shir ku saabsan kheyraadka Soomaaliya oo ka furmay Jabuuti – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shir ku saabsan kheyraadka Soomaaliya oo ka furmay Jabuuti
A warsame 23 March 2015 23 March 2015
Shir looga hadlaayo dhaqaalaha Soomaaliya iyo sida loo ilaalin lahaa Kheyraadkeeda ayaa waxa uu ka furrmay Magaalada Jabuuti dalka Jabuuti waxaana ka qeyb galaayo madax ka socota Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka jira oo intooda badan lagu casuumay shirka.
Shirkan ayaa la shegay in uu socon doono mudo 5 maalin ah inta badana diirada la saarayo sidii loo ilaalin lahaa Kheyraadka dalka Soomaaliya iyo maraakiibta shisheeyo oo la rumeysan yahay in xaalufin ba’an ay ku hayaaan qeyraadka Soomaaliya.
Dalka Soomaaliya ayaa ah dal uu ilaahey uu kumaneystay Kheyraad fara badan waxaana la rumeysan yahay in Kheyraadkaasi in sii sharci daro ah ay kaga faa’iideystaan maraakiib shisheeyo ee ka kaluumeysata Xeebaha dalka Soomaaliya.
Hase ahaate shirkaan ayaa noqonaayo shirkii ugu horeeyay ee looga hadlo dhaqaalaha Somalia ayna inta badan ay ka qeyb galaan madax ka kala socoto mamul Goboledyada dalka ka jira.
Mo Farah breaks European half marathon record in Lisbon win
Somaliland: Ganacsade ku dhintay rasaas uu askari ku furay wafdi wasiir horkacayayey